February 4, 2020 - Tameelay
တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးဘဝနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကိုယ် သာသာယာယာဖြတ်သန်းနေရတာကိုပဲ ပျော်ရွှင်ပါတယ်
February 4, 2020 Tameelay 0
အပျိုကြီးတဲ့ ၃၀နားကပ်လာတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို လှောင်တဲ့ပြောင်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတတ်ကြတယ် တကယ်ဆို အပျိုကြီးဖြစ်ဖို့ လွယ်တယ်များ မှတ်နေလားမသိဘူး လင်ယူသားမွေးပြီး အပူမီးတွေကို မလိုချင်လို့ တစ်ဦးတည်းတစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်လဲ တခြားသူတွေလို နားလည်ပေးတတ်တဲ့ ပုခုံးလေးတစ်စုံလောက် ပေးသနားပါလို့ အသနားခံပြီး တောင်းနေစရာမလိုဘူး ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်တတ်အောင် ဖေးမတတ်အောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ […]
ကြၽန္မ အၿမဲတမ္းမရင့္က်က္ခ်င္ဘူး ကေလးေလးတစ္ေယာက္လို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေလး ေနခြင့္ရရင္ ေနခ်င္ေသးတယ္
ကျွန်မ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ ကလေးဆန်ဆန် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေး နေချင်တယ် အမြဲတမ်း ရင့်ကျက်ချင်ယောင် မဆောင်ချင်ဘူး ကလေးတစ်ယောက်လို ဘယ်အရာကိုမှ ငဲ့မကြည့်ပဲ လိုချင်တာတွေ ရမလာတဲ့အခါ အကျယ်ကြီးအော်ငိုပစ်တတ်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ တစ်ခါတစ်ရံတော့လဲ ကျွန်မ လိုပါတယ် ရင်ဘတ်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေအောင် ချုပ်တည်းထားရတာတွေက အရမ်းကို မွန်းကျပ်စေသလို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် […]
ဘဝမှာ အယူချည်းသက်သက်သာ ပိုင်တဲ့လက် မဖြစ်စေနဲ့ ပြန်လည်ပေးတတ်တဲ့ လက်တစ်စုံဖြစ်ပါစေ
လောကကြီးက လက်နှစ်ဖက်ထည့်ပေးလိုက်တာ လက်ဖြန့်တောင်းခံဖို့သက်သက်ပဲ မဟုတ်ဘူး ပြန်လဲ ပေးတတ်ဖို့ပါ သူ့အလှည့် ကိုယ့်အလှည့်ဆိုတဲ့ သဘောတရားလေးပေါ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ရတိုင်းယူလို့ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး အခွင့်အရေးယူပါများရင် နောင်သံသရာဆိုတာ ဝေးပါသေးတယ် ခုလက်ရှိမှာကို လူတိုင်းအမြင်ကပ်ကြတယ် ပေးတဲ့သူက ကြည်ဖြူလို့ပေးတာကို ဘေးကနေ မနာလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ မနာဖြစ်စရာ အကြောင်းကို မရှိတာပါ ပေးသူနဲ့ယူသူ […]
ကြားသုံးကြားမဝင်မိစေနဲ့တဲ့ မိသားစုကြား မောင်နှမကြား ချစ်သူရည်းစား လင်မယားတွေကြား ဒီကြားသုံးကြား မဝင်မိစေနဲ့
ကြားသုံးကြားမဝင်မိစေနဲ့တဲ့ မိသားစုကြား မောင်နှမကြား ချစ်သူရည်းစား လင်မယားတွေကြား ဒီကြားသုံးကြား မဝင်မိစေနဲ့ အဆင်ပြေနေတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်မပြေတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ရင် ဝင်မပါနဲ့ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ်က သူစိမ်းဟာ သူစိမ်းပဲ အဆင်မပြေလဲ ခဏပဲ ပြီးရင် ပြန်ပြီးသင့်မြတ်သွားကြမှာလေ ရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်သာ ကိုယ့်ကိုရင်တွေဖွင့်ပြီး […]
ဆန္ဒနဲ့ဘဝဟာ အမြဲတစ်ထပ်တည်းမကျနိုင်ဘူးလေ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေရှိပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရင်နာနာနဲ့ မေ့ပစ်လိုက်တာတွေလဲ အတိတ်မှာ အများကြီးပါ ယခုလက်ရှိမှာလဲ အများကြီးပါပဲ နောက်လဲ ထပ်ရှိချင် ရှိလာဦးမှာ ပြင်းပြင်းပြပြဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒသာရှိရင် ဘယ်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ အမြဲတမ်းတော့ မမှန်နိုင်ဘူးထင်တယ် ကိုယ့်မှာ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေ ရှိပေမယ့် အနောက်မှာ ရပ်နေတဲ့ဘဝတွေကို […]
သမီးလေးဖတ်ဖို့ ဖေဖေရေးတဲ့စာ (၁)
သမီးလေးရေ . . . ဘဝဆိုတာ ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ကြမ်းတမ်းလွန်းမှန်း တစ်နေ့ ညီမလေး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ သိလာလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် လွယ်လွယ်လေး အားမလျှော့လိုက်နဲ့ အရှုံးမပေးလိုက်တဲ့ လောကကြီးက ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ လက်နဲ့ခြေထောက်ဆိုတာ လက်မြှောက်ဖို့နဲ့ ဒူးထောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး ဆက်ပြီး လျှောက်ဖို့နဲ့ ဆက်ပြီးမလျှောက်နိုင်တဲ့အခါ ကုန်းထပြီး […]
အချိန်တွေ မဖြုန်းတီးပစ်ပါနဲ့ အရမ်းကို နှမြောစရာ ကောင်းတယ်
အချိန်. . . ဆုံးရှုံးပြီးသွားရင် ပြန်မရတတ်တဲ့အရာထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ပေါ့ နောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူး ဓာတ်ခဲကုန်လို့ရပ်နေရင်တောင် နောက်ပြန်ဆုတ်မသွားတတ်ဘူး မူလနေရာမှာပဲ ရပ်နေတတ်တဲ့ အချိန်ပေါ့ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာတာနဲ့ အချိန် အကန့်အသတ်ဆိုတာ ပါလာပြီးသားပါ တချို့အတွက် အနှစ်ခြောက်ဆယ် အနှစ်လေးဆယ် သုံးဆယ်စသည်ဖြင့် ကံရှိသလောက် အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ လာပြီးသားပါ အဲ့ဒီအချိန်အတောအတွင်း […]
ဆွေမျိုးတိုင်းမကောင်းဘူးမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေကတော့ တော်တော် ငွေခင်တတ်တဲ့ အမျိုး ငွေလေးမြင်ရင် ဟိုးအဝေးကြီးရောက်နေလဲ ပြေးပြီးလာနှုတ်ဆက်ဖော်ရတယ် ။ အမျိုးဘယ်လိုတော်တာ ဘယ်ညာတော်တာ လာပြီးစပ်ပြတယ် ။ ဘူးသီးကို မြင်နေပြီပဲ အရီးခေါ်ဖို့လဲ ဝန်မလေးဘူးလေ ဒါပေမယ့် လက်ထဲမှာ ငွေမရှိတဲ့အခါလို့ ဆက်ပြီးပြောဖို့တောင် အချိန်မရဘူး အနီးအနားမှာ […]
အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါမွေနာင္တမရဖို႕ ငယ္ရြယ္စဉ္မွာ ဒါေတြဆင္ျခင္ပါ
February 4, 2020 yoon waddy 0
အစေကာင္းမွအေနွာင္းေသခ်ာဆိုတဲ့စကားေလးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီစကားက အလကားေျပာခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘဝအစ ငယ္ရြယ္စဉ္မွာ လုပ္သင့္တာကိုမလုပ္ခဲ့ရင္၊ မလုပ္သင့္တာေတြလုပ္ခဲ့ရင္ အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါ ေနာင္တရရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသက္ၾကီးလာခ်ိန္မွာ ေနာင္တမရရေအာင္ ဒီအမူအက်င့္ေလးေတြကို အထူးသတိထားဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံျဖုန္းျခင္း ရသမွ်ပိုက္ဆံေတြအားလံုးကို စုလည္းမစု၊ လုပ္ငန္းမွာရင္းႏွီးတာမ်ိဳးလည္းမလုပ္၊ ပညာရပ္အသစ္ေတြသင္ရာမွာလည္း မသံုးဘဲ အေပ်ာ္အပါးေတြအတြက္ပဲ သံုးျဖုန္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါ ေနာင္တရရပါလိမ့္မယ္။ ေခတ္ေပၚဖက္ရွင္ေတြေနာက္လိုက္လြန္းျခင္း […]
ဘယ်ဆက်ဆံရေးမှာမဆို တတိယလူ ဝင်လာတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ နာကျင်ထိခိုက်ရတာပါပဲ
တတိယလူ . . . .အရမ်းကို သင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မောင်နှမတွေ အရမ်းကို ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သမီးရည်းစားလင်မယားတွေ စည်းလုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ မိသားစုတွေကြား တတိယလူ ဝင်လာတဲ့အခါ အလိုလို ပြိုပျက် ပျက်စီးရပါတယ် တတိယလူတဲ့ စကားလုံးလေး ရိုးရှင်းသလို အဓိပ္ပါယ်လဲ ထင်သလောက် မနက်နဲပါဘူး ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဝင်လာတတတ်တဲ့ တတိယလူတွေကတော့ အများကြီးပဲပေါ့ […]